Uzimakethela yena uqobo umculo wakhe wokholo | Isolezwe
Uzimakethela yena uqobo umculo wakhe wokholo
Isolezwe / 15 August 2012, 2:21pm /
U- Europa Ngubane osezibambele yena mathupha ukuqinisekisa ukuthi iphupho lakhe lokuba wumculi liyafezeka emuva kokujabhiswa kaningi yizinkampani zomculo
EMUVA kwenqwaba yezethembiso ezingafezwa ayezithola ezinkampanini zomculo, u-Europa Ngubane, usevele wazinikela ekuzimaketheleni umculo wakhe wokholo yena mathupha.
Ukusebenza umsebenzi wokubamba izingcingo eKearsney College akumvimbanga ukuba aphokophelele ukulandela iphupho lakhe lokuba ngumculi njengoba esekhiphe i-albhamu yowokholo ethi Bamb’isandla Sami.
Uthe uhlanganise le albhamu ezikhokhela yena izindleko elekelelwa nguNkk Ruth Mlotshwa owazithandela umsebenzi awenzayo.
U-Europa (46), osehlanganise iqembu kusona lesi sikole, uthe kudala lavela ithalente lakhe kwezomculo esenza ibanga lesishiyagalombili ePhezulu High, eHammarsdale, lapho aqala khona ukubhala izingoma.
“Abantu engangifunda nabo babengibiza uDiana Ross ngendlela engangikwazi ukuhlanganisa ngayo ingoma izwakale,” kuchaza u-Europa.
Usaqhubeke ngalolo nyawo njengoba zonke izingoma ezikule albhamu uzibhalele ngokwakhe kepha uthi okuhlukile ngukuthi lezi sekungezokholo.
I-albhamu yakhe ephume ngoMashi nonyaka iqukethe izigqi ezahlukahlukene, okubalwa nesikamaskandi. Lokhu kwenziwa wukuthi unabaculi abaningi ababhekile abamgqugquzelayo.
Uzidayisela yena qobo iCD. Abalandeli bakhe bamshayela ucingo bese befaka i-oda, uma isikhona uyabahambisela noma abaposele labo abahlala kude. Lo mculi, ozifelayo ngesihlabani somculo wokholo saphesheya, uShirley Caesar, uthe okuyikona okwamsusa phansi kwamenza walandela iphupho lakhe ngukwamukela uJesu.
“Emuva kokwamukela uJesu ngaqala ukuqondisisa ithalente lami nokuthi kumele ngenzeni ngalo. Ngomculo wami ngidlulisa umlayezo wokuthi uJesu uyimpendulo kuzona zonke izimo ongahle ubhekane nazo,” kusho u-Europa.
Uthe abantu abamgqugquzela ukuba angatheneki amandla ngezingqinamba ahlangabezana nazo nguyise, uMfundisi Meshack Ngubane, nodadewabo omncane, uMpume, naye onguMfundisi.
Isifiso esikhulu sika-Europa wukuthola inkampani azoqopha kuyo ngoba ethi lokhu kuzomsiza ekudlondlobaliseni umculo wakhe.